I-Excel ka-2011 yeMac: Sebenzisa incamathelisi Uphawu olukhethekileyo
NguGeetesh Bajaj, uJames Gordon
KwiOfisi ka-2011 yeMac, ukhetho olulula lwePhepha lokuPhatha lujongana neemfuno zakho eziqhelekileyo zokuncamathisela, kodwa sisivumelwano esinye-ungakhetha ukhetho olunye kuphela. Kwelinye icala, Cola into ekhethekileyo kwi-Excel 2011 ye-Mac ekuvumela ukuba ukhethe kwaye ukhethe ngqo ukuba yeyiphi na okanye indibaniselwano yeempawu ofuna ukuzincamathisela.
Khetha iseli okanye uluhlu lweseli ukuze ukope kwaye ukhethe Hlela → Khuphela.
idosi yemihla ngemihla ephezulu kakhulu ye-gabapentin
Cofa kwiseli apho ufuna ukunamathisela khona kwaye ukhethe Hlela → Cola okhethekileyo.
Kwi Cola icandelo lencoko yababini, khetha ukhetho olifunayo.
Cola iqhagamshela iqhosha lisebenza ngokuxhomekeke kwinto oyikhupheleyo kwaye ukhethe ukhetho olukukhetha kwi Cola incoko yababini. Cola iqhagamshela iqhosha lincamathisela ifomula yeseli ebhekisa kwiseli oyikhuphelayo.
Ukuguqula imiqolo ibe ziikholamu ngoCola ngokukhethekileyo kwi-Excel 2011 yeMac
Amaxesha amaninzi, unokunqwenela ukuba ungatshintsha ngokulula ubeko lwedatha ukusuka ethe nkqo iye nkqo, okanye ngokuchaseneyo. Ngethamsanqa, ukhetho lwe-Excel's Cola iTranspose ekhethekileyo lwenza kanye loo nto.
Ukutshintsha iikholamu zibe yimigca ngokukhawuleza, landela la manyathelo:
Khetha uluhlu lweseli kwaye ukhethe u-Hlela → Khuphela.
Khetha iseli ekuyiwa kuyo.
Khetha Hlela → Cola okhethekileyo.
Khetha ibhokisi yokukhangela yokutshintsha uze ucofe u-Kulungile.
ipilisi ene m kuyo
Sebenzisa Cola okuKhethekileyo ngezinto ezikwi-Excel 2011 yeMac
Ukuba ukopa into, endaweni yeseli okanye uluhlu lweseli, Cola incoko yababini inika ukhetho lokuncamathisela olufanelekileyo kuhlobo lwento oyincamathisileyo. Iitshathi, iitafile, kunye nemifanekiso zonke zinokuncamathisela okukhethekileyo kwiPaste Special, nganye ichazwe kwinxalenye yenkcazo yencoko yababini ekhethekileyo.
Ungasebenzisa Cola into ekhethekileyo kwi-Excel ngokusebenzisa umxholo owukhupheleyo kwesinye isicelo esivulekileyo, njengeLizwi, iPowerPoint, okanye isikhangeli seWebhu. Izinketho ku Cola utshintsho lwencoko yababini ngokuxhomekeke kwinto oyikhupheleyo kwiBhodi eqhotyoshwayo.
Ukukopa njengomfanekiso kwasekuqaleni
Unokukopa ngokulula umfanekiso wento, iseli, okanye uluhlu lweeseli, kodwa kuya kufuneka uyazi malunga nemenyu yokuHlela eyimfihlo. Landela la manyathelo ukusebenzisa imenyu yokuHlela eguqulweyo:
Khetha iseli, uluhlu lweeseli, okanye into kwiphepha lokusebenzela.
Gcina isitshixo seShift kwaye ucofe imenyu yokuHlela.
Nantsi imfihlo! Xa ubamba iqhosha leShift, imenyu yokuHlela inikezela ngokukopa umfanekiso kunye nokuncamathisela ukhetho lweZithombe.
Khetha Hlela → Khuphela umfanekiso.
Cofa enye yokhetho:
Njengoko S hown okanye n S kholelwa: Into oyibonayo yile uyifumanayo.
Njengoko S hown NGAPHAKATHI isikhukukazi Iphe ishicilelwe: Umfanekiso ufomathiwe ngokusekwe kukhetho lwakho lwangoku kuseto lwekhasi.
Ngoku, unomfanekiso kwibhodi eqhotyoshwayo onokuyisebenzisa kwi-Excel okanye nasiphi na isicelo esinokuncamathisela imifanekiso.
Unokubamba iShift kwaye ukhethe u-Hlela → Cola umfanekiso ukuze uncamathisele imixholo yebhodi eqhotyoshwayo njengomfanekiso, nokuba uvela phi.
uhlobo lwepeyinti ekhitshini
wenza ntoni i-sildenafil
Unyango lwe-3 degree yonyango
iidosi ze-topiramate zokunciphisa umzimba
ukugubungela kwicala lasekunene phantsi kweembambo